एक दर्जन पदमार्ग खुला, डोल्पामा १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन - नागरिक रैबार
१४ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीपछि खुलेको पदयात्राका लागि एक दर्जन गन्तव्य सहज बनेका छन् । सरकारले १७ अक्टोबरबाट विदेशी पर्यटकले समेत पदयात्रा गर्न पाउने गरी खुला गरेको थियो ।
त्यसयता १२ वटा गन्तब्य पर्यटकका लागि सहज बनेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले जनाएको छ । तर, हिमाली क्षेत्रमा साविकका केही निषेधित क्षेत्रमा भने अहिले पनि पर्यटकको प्रवेशमा प्रतिवन्ध कायम रहेको छ ।
टानकी महासचिव सरिता लामाका अनुसार पदयात्राका दौरान पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड भने पालना गर्नेपर्छ । त्यसमा पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएको दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्छ । पदयात्रीले पदयात्रा अनुमति पनि लिएको हुनुपर्छ ।
कुन कुन गन्तब्य पर्यटकका लागि खुला ?
कंचनजङ्गगा पदयात्रा क्षेत्र
सगरमाथा आधार शिविर पदयात्रा मार्ग
मार्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्र
मनाङ पदयात्रा क्षेत्र
मुस्ताङ पदयात्रा क्षेत्र
डोल्पा पदयात्रा क्षेत्र
हुम्ला पदयात्रा क्षेत्र
मनास्लु पदयात्रा क्षेत्र
हेलम्बु पदयात्रा क्षेत्र
रुवीभ्याली पदयात्रा क्षेत्र
डोल्पामा १४ दिन क्वारेन्टिन अनिवार्य
खुलाका पदयात्रा मार्ग क्षेत्रमध्ये पनि डोल्पामा भने पर्यटकको आगमनमा कडाइ गरिएको छ । महासचिव लामाका अनुसार यहाँ जुनसुकै प्रवेश विन्दुबाट पुग्दा पनि पर्यटकको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्छ । त्यस्ता पर्यटकले डोल्पामा प्रवेश पाउने छन् ।
प्रवेश गरेपछि भने उनीहरु कम्तीमा १४ दिन आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टिन बस्नु पर्नेछ । त्यसपछि मात्र उनीहरुले डोल्पामा पदयात्राको अनुमति पाउने भएका छन् ।
सरकारले नेपालमा आउने पर्यटकलाई पछिल्लो ७२ घण्टाको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट र नेपालमा ७ दिन होटेल क्वारेन्टिनका लागि बुकिङ गरेपछि नेपाल आउने अनुमति दिन्छ । त्यसमा पनि डोल्पा प्रवेशमा भने कडाइ गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण पदमार्ग र घान्द्रुक क्षेत्र बन्द
देशका अन्य पदयात्रा मार्ग खुला भएपनि सबैभन्दा आकर्षकमध्ये एक अन्नपूर्ण पदमार्गमा भने स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले नै पदमार्ग बन्द गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस भन्दै यो पदयात्रा बन्द गरेका हुन् । महासचिव लामाका अनुसार सोही कारण अन्नपूर्ण र घान्द्रुकमा तत्काल पदयात्रा गर्न सम्भव छैन ।
एभरेष्ट पदयात्रा शर्तसहित खुला
सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुग्ने एभरेष्ट पदयात्रा मार्गमा यसअघि लागेको प्रतिवन्ध भने शर्तसहित खुलेको छ । खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिकाले ९ कात्तिकमा एक निर्णय गर्दै ६ कात्तिकमा लागेको अनिश्चितकालीन प्रतिवन्ध फुकुवा गरेको हो ।
त्यसअनुसार गाउँपालिकाले निश्चित अस्पताल तोकेर ती अस्पतालबाट गरेको परीक्षणलाई मात्र गाउँपालिकामा मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईका अनुसार सबै सरकारी अस्पतालबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिइएको छ ।
तर, निजीमा भने ह्याम्स हस्पिटल, स्टार अस्पताल र बीएण्डबी हस्पिटलबाट गरिएको पीसीआर परीक्षणलाई मात्र गाउँपालिकाले मान्यता दिने भएको छ । यसअघि निजी अस्पतालको फर्जी रिपोर्ट लिएर समेत मानिस गाउँपालिका छिरेको पाइएको भन्दै यस्तो निर्णय गर्नु परेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको पर्यटन व्यवसायले गति लिने दाबी गरेका छन् ।चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा निर्माण हुन लागेको एक होटलको सोमबार शिलन्यास गर्दै मन्त्री भट्टराईले भने, ‘नेपालको पर्यटन क्षेत्र कोरोनाका कारण सुनसान रहेपनि २०२२ सम्ममा पहिलेको भन्दा तीव्र गति जानेछ । कारोनाका कारण थलिएको पर्यटन विस्तारै उठ्दैछ सन् २०२१ को मध्यमा […]
१४ मंसिर, काठमाडौं । चन्द्रप्रसाद ढकालले आइतबार विहान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिते। अब उनले शेखर गोल्छापछि महासंघको अध्यक्ष बन्ने पक्का गरेका छन् । बाग्लुङको बलेवा, अमलाचौरका जन्मिएका चन्द्रको भुइँबाट उठेर सफलताको यो उचाइसम्म आइपुगेका व्यक्ति हुन् । उनको जीवन कथा थाहा पाउन विगतमै फर्किनुपर्छ । बाग्लुङको एक विकट गाउँका एक किशोर चन्द्र […]
उद्योग वाणिज्य महासंघको मतदान जारी
१३ मंसिर, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न मतदान भइरहेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्यासीद्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधानलगायतका उम्मेदवारहरुले बढीभन्दा बढी मत आफूतिर तान्ने प्रयास जारी राखेका छन् । विज्ञापन ढकाल एशोसिएट सदस्य भएकाले कार्की व्याङ्केटबाट र प्रधान बस्तुगत समूहको सदस्य भएकाले महासंघको […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव आज
काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि आज मतदान हुँदैछ ।महासंघको ५४औँ वार्षिक साधारण सभाको बन्दसत्र सम्पन्न भएसँगै आउँदो कार्यकालको वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी चयनका लागि चुनाव हुन लागेको हो । सहमतिको प्रयास सफल नभएपछि ६४ पदका लागि १ सय २१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।काठमाडौँका तीन ठाउँमा हुने मतदान बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो […]
स्वदेशी फूलको मालामै यस वर्षको तिहार
२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली हिन्दूहरुको दोस्रो ठूलो पर्व तिहार अर्को सातादेखि सुरु हुँदैछ । तिहार भन्ने बित्तिकै दाजुभाइ–दिदीबहिनीसँगको भेटघाट, बत्तीको झिलिमिली, मिठा परिकार र फूलहरुको रौनक हामी सबैको मानसपटलमा घुम्छ । मलमासका कारण यस वर्षको दशैं–तिहार झण्डै एक महिना पछि सर्न पुग्यो । पर्व पछि सरे पनि प्रकृतिको चक्र त किन सर्थ्यो ? हाम्रा […]